सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको फोन, एकएक दिए यस्तो चेतावनि — Imandarmedia.com
सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको फोन, एकएक दिए यस्तो चेतावनि
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई टेलिफोन गरी जसरी भएपनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन दबाब आग्रह गरेका छन्।
देउवाले मंगलबार सभामुख सापकोटालाई टेलिफोन गरी प्रतिनिधि सभा बैठकका कार्यसूची तय गर्न समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबार बस्ने तय भएको छ। तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने/नबस्ने तय भएको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी टेबुल हुने सम्भावना छ।
कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुका अनुसार भोलिकै बैठकमा एमसीसी टेबुल गरौं भन्ने प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरु अमेरिकी सहयोग परियोजना,
मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याट एमसीसी संसदमा लैजान सहमति जुट्नेमा ढुक्क थिए। जब बैठकमा उनीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुने, तब उनी पूर्व सहमतिबाट पछाडि फर्किएको अनुमानमा पुगे।
उनले भनेका छन्, नेकपा हुँदा नै पार्टीले नै निर्णय गरेको हो, जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन हुँदैन। यद्यपि दलहरुबीच सहमति हुँदा निकास दिन सकिने भन्दै प्रचण्डले के निकास हुनसक्छ भनेर सहमति खोज्नुपर्ने बताएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पहिले संसद खुल्नुपर्ने त्यसपछि एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए। उनले अनलाइनखबरसँग भने, माओवादीको धारणा प्रष्ट छ, सबभन्दा पहिले संसद खुल्नुपर्छ।
त्यसपछि एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास हुनुपर्छ। अनि मात्रै अघि बढ्ने नबढ्ने प्रष्ट हुन्छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउन नहुने बताएका छन्।
कानुनमन्त्रीको काउन्टर: नेताहरुका अनुसार प्रचण्डले एमसीसी टेबल गर्नै नदिने त बताएनन्, तर पहिले संसदको अवरोध हट्नुपर्ने बताए । सभामुख सापकोटाले पनि दलहरु निर्णायक र आफू अम्पायर मात्र भएको बताए । तर संसदको अवरोध हट्नुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए ।
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, नभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको माग रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, यो माग पूरा गर्न सकिन्छ ? त्यसमै प्रधानमन्त्री देउवाले थपे, एमालेले त सभामुखलाई राजीनामा गराऊ भनेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अस्ति त माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई हटाउनुपर्‍यो मात्र भनेका थिए, सभामुखप्रति सफ्ट थिए होइन र’ भनेर प्रश्न गरे।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सभामुखबारे धारणा बताएको बैठकमा सुनाए। यद्यपि सरकार सभामुखलाई राजीनामा गराउने पक्षमा नभएको पनि उनले स्पष्टोक्ति दिए।
त्यसपछि जनकपुर पुगेका उनी साँझ मात्र फर्किएकाले एमसीसी अघि बढाउन सहमति दिएकामा आक्रोशित पार्टीका नेताहरुले उनलाई भेट्न पाएनन्। आइतबार विहानै नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरु प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगे।
नेताहरुले अहिले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने तर्क गरे। संसद अवरुद्ध भएको अवस्थामा यस्तो विषय छलफल गराउन सकिन्न। अहिलेसम्म कुनै पनि ऋण र सहयोग सम्झौता संसदमा पेश गरेको छैन।
भोलि कसैले माग गरे पनि गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, एक नेता भन्छन्, नभए कसरी यो सम्झौता संसदमा प्रवेश गराउन सकिन्छ ?
त्यसपछि प्रचण्डले ल त ल सर्वदलीय बैठकमा यही कुरा राख्छु भनेको एक नेताले बताए ।प्रचण्डलाई भेटेका नेता मध्येका एक हरिबोल गजुरेल पनि संसदको अवरोध कायमै रहेको बेला एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन्।